Ny zon’ny vehivavy any Pakistana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Mey 2018 3:14 GMT
Vakio amin'ny teny Français, 简体中文, 繁體中文, Nederlands, Italiano, polski, বাংলা, Español, македонски, English
Mbola mila ezaka maro mba hitovizany amin'ireo firenena mandroso i Pakistana amin'ny maha-firenena an-dàlam-pandrosoana azy. Mihoatra ny antsasaky ny mponina ao amin'ny firenena ny isan'ny vehivavy, saingy indrisy fa tsy mba manan-jo izy ireo. Ny 8 Martsa tamin'ity taona ity (2010) , nankalaza ny “andron'ny vehivavy” ihany koa i Pakistana tao anatin'ny fiezahana mba hanova ny fiainan'izy ireo tamin'ny alàlan'ny fanehoana ny taratry ny fanantenana ho an'ny vehivavy tsirairay. Iray amin'ireo zava-misy henjana atrehan'ny vehivavy Pakistaney ny herisetra an-tokantrano . Nilaza ireo mpikatroka mitolona hiarovana ny vehivavy fa vehivavy maro no mbola miaina ao anatin'ny herisetra satria mihevitra izy ireo fa tsy maintsy mankatò ny vadiny ary mahamenatra ny fisaraham-panambadiana.
Araka ny tatitra nataon'ny ONG White Ribbon Campaign (WRC na fanentanana fehilamba fotsy), iharan'ny fampijaliana tsy mitsaha-mitombo ny vehivavy Pakistaney. Notaterina isan-taona ny fitomboan'ny trangan-kerisetra any Pakistana. Araka ny tatitra, “anisan'ny endriky ny herisetra atao amin'ny vehivavy ny hersisetra ara-nofo eny amin'ny toeram-piasana, ny fanararaotana, ny famonoana ary ny fanolanana .”
Nanambara i Dr. Farzana Bari, lehiben'ny Foibe ho an'ny Fanabeazana momba ny lahy sy ny vavy ao amin'ny Oniversiten'i Quaid-e-Azam, fa toa fahadisoan-kevitra ihany ny fankalazana ny andron'ny vehivavy amin'ny lohahevitry ny Firenena Mikambana hoe “Ny fitovian-jo, ny fahafahana mitovy: ny fandrosoana ho an'ny rehetra” ” rehefa tsy misy ny zo sy ny fahafahana eo amin'ny fiainan'ny olona tsirairay; ny lehilahy, ny vehivavy ary ny ankizy.”
Nilaza ilay mpanoratra ato amin'ny Global Voices, Sana Saleem ao amin'ny bilaogy Dawn hoe:
Tany Pakistana, niady hevitra momba ny volavolan-dalàna iray mikasika ny fandraràna herisetra an-tokantrano ny parlemanta. Nanaraka izany akaiky Ireo mpikatroka ny zon'ny vehivavy sy ny mpanao lalàna Islamista. Mbola tsy fantatra tamin'izay fotoana izay izay handresy. Nanontany ny fahombiazan'ny fitsarana ilay bilaogera Pakistaney Baaghi satria tsy misy lalàna matanjaka hiarovana ireo vehivavy: